Iindaba - Iphepha lokulwa kunye nokulawulwa komgangatho wephepha lokudlulisa ubushushu
Iphepha lokutshintshela luhlobo lwephepha eligqunyiweyo. Ukuba izinga lokwandiswa komgangatho odibeneyo kunye nephepha elixhasayo alihambelani phantsi kobushushu kunye nobushushu obuphezulu, kuya kubangela i-warpage enye. Xa iphepha lokutshintshela lijikeleza, liya kubangela ukuphazamiseka kulandelayo:
1. Akulula ukuba umshicileli akhuphe iphepha (Ukomisa ubushushu begumbi (warpage)
2. Xa amaphepha eprintwa ngobuninzi kwaye aqokelelwe, ukulungiswa akunzima ngenxa ye-warpage.
3. Ngaphambi kokushicilela ubushushu bokudlulisa ubushushu, ngenxa yephepha lokulwa kwephepha lokudlulisa, ukulungelelaniswa kwephepha lokudlulisa kunye nelaphu alichanekanga, okubangela ukungaphumeleli kokudluliselwa (Ukomisa ubushushu begumbi (i-warpage)
4. Ngaphantsi kwepleyiti eshushu yoshicilelo lokudlulisa ubushushu, i-warpage yephepha lokudlulisa liya kubangela ukutshintshwa kokutshintshwa kwaye kubangele ukusilela kokudluliselwa (I-warpage ephezulu yokushisa)
Iimveliso eziveliswe ziifektri ezahlukeneyo zamaphepha ekhaya nakwamanye amazwe zinemigangatho eyahlukeneyo ye-warpage. Iphepha lokudlulisa eligqwesileyo line-angle encinci ye-warpage kunye ne-warpage ecothayo, enokuthi ihlangabezane neemfuno ze-flatness kunye nexesha kwinkqubo yokushicilela kunye nokudlulisa imveliso. Kulula ukusebenza.
Yingxaki enzima kubavelisi bephepha abagqithiselayo ukoyisa i-warpage. Indlela yokwaleka emacaleni kabini inokuphucula ngempumelelo i-warpage, kodwa inyusa iindleko zemveliso. Uninzi lwezixhobo zokuvelisa iphepha lokutshintshela ekhaya zihlala zingenazo iimeko ezinjalo, ngoko zinokuphuculwa kuphela kwifomula yokwaleka kunye nenkqubo yokuvelisa.
Iphepha lokudlulisa i-Inkjet lifuna ukuba okuncinci ukushwabana, kungcono. Ukuba imibimbi iyingozi kakhulu ngexesha loshicilelo, kusenokwenzeka ukuba iphepha liya kugquma kwaye lihlikihle umlomo, ngakumbi xa uburhabaxa bephepha bukhulu, kunokwenzeka ukuba lonakalise umbhobho oethe-ethe (amanye amashishini ongeza umgubo orhabaxa we-inorganic kwi-coating ukwenzela ukunciphisa iindleko, ukwenza iphepha lokutshintshela phezulu njenge-sandpaper). Indlela ephambili yokunciphisa ukushwabana kwephepha lokudlulisa kukuqala ukusuka kwiphepha lesiseko. Xa isiseko sephepha sishwabene sincinci, i-coating kunye nokushicilela imibimbi iya kuba yincinci. Okwesibini kukuphucula i-formula yokwambathisa ukufezekisa injongo yokunciphisa imibimbi.
Ifomula yokugqoka yephepha lokudlulisa i-nano material, eqinisekisa ukuguquguquka kwendawo yokudlulisa iphepha ngaphezu kwemizuzwana ye-3, kwaye ayiyi kulimaza i-nozzle.
Ibala (indawo yokungcola) kumphezulu wephepha lokudlulisela lisalathiso esibalulekileyo sephepha lokudlulisela. La mabala anokuveliswa kwiphepha elisisiseko, ukugquma okanye inkqubo yokuvelisa. Le ndawo ibeka emngciphekweni indawo enkulu yoshicilelo oluluqilima lombala, kodwa inefuthe elincinci kushicilelo oluhle. Ingxaki yendawo ixhaphakile kwiphepha lokutshintshela ekhaya. Inkampani yaseSuzhou Quanjia yenze uphando oluninzi kunye noPhando malunga nokupheliswa kwebala, kwaye yenza iinzame ezininzi kwisizukulwana kunye neendlela zokuphelisa indawo. Kukho imimiselo engqongqo kunye nolawulo ukusuka kwisiseko sephepha ukuya kwifomula yokugquma kunye nenkqubo yokuvelisa, kodwa kusenokubakho amabala angama-1-2 ngemitha yesikwere, kunye nefomula entsha efakwe ekusebenzeni kunye nokuguqulwa kwezixhobo, kulindeleke ukuba kupheliswe amabala kwaye ifikelele inqanaba eliphezulu lamazwe ngamazwe.
Ukuzinza komgangatho kuyisalathisi esibalulekileyo sokusebenziseka. Umgangatho womphezulu wephepha lokudlulisa unxulumene ngokusondeleyo ne-inki yomsebenzisi, ukusetwa kwedatha yokuprinta kunye nokusetwa kwepharamitha yomatshini wokudlulisela. Ukuguquguquka okanye utshintsho oluqhubekayo lomgangatho ophezulu wephepha lokudlulisa kuya kunyanzela umsebenzisi wokugqibela ukuba alandele uhlengahlengiso. Umzekelo, ulungelelwaniso lombala wokuqala kufuneka lwenziwe ngokutsha, Iisampulu zokuqala zoshicilelo ezinikezelwe kubathengi azinakwenziwa kwakhona kodwa zinokuphinda zenziwe kwakhona. Ngoko ke, abathengi bokugqibela bafuna umgangatho ozinzile. Abavelisi bephepha lokudlulisa kufuneka bafake ukubaluleka okukhulu kule nto, kuba umgangatho ozinzile kuphela unokuphumelela inani labathengi abathembekileyo.